'အီး' အသံထွက်ဖြင့် အဆုံးသတ်သည့် စာလုံးပေါင်းခြင်း (Spelling the/ i:/ sound) - Myanmar Network
'အီး' အသံထွက်ဖြင့် အဆုံးသတ်သည့် စာလုံးပေါင်းခြင်း (Spelling the/ i:/ sound)
Posted by Myanmar Network on April 27, 2012 at 10:53 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
(Phonetic symbols များအား သေချာစွာမြင်ရစေရန် Firefox ကိုသုံး၍ကြည့်ရန် အကြံပြုပါသည်)
အောက်ဖော်ပြပါ စာလုံးအားလုံးသည် / i:/ sound 'အီး' အသံဖြင့် နောက်ဆုံး final vowel sound ရှိသော စာလုံးများဖြစ်ကြပါသည်။
သို့ပါသော်လည်း စာလုံးပေါင်း ကွဲပြားခြားနားပုံကို အုပ်စုများခွဲ၍ အသံထွက်ပုံကို phonemic script ဖြင့် ၎င်း၊ မြန်မာ အဓိပ္ပါယ်များကို၎င်း၊ စာလုံးများနှင့် ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြထားပါသည်။
1) 'eed' ဖြင့် အဆုံးသတ်သည့် စာလုံးများ
(a) Proceed (v) /prə ˈsi:d/ (လုပ်လက်စအလုပ် ဆက်လုပ်သည်။ အလုပ်တစ်ခုပြီးဆုံးပြီးနောက် အလုပ်တခု ဆက်လုပ်သည်။)
(b) exceed (v) /ɪkˈsi:d/ (ပိုသည်။လွန်သည်။)
(c) Succeed (v) /səkˈsi:d/ ( အောင်မြင်သည်။)
(d) Indeed (adv) /ɪnˈdi:d/ (စင်စစ်။တကယ့်ကို။)
2) 'ede' ဖြင့် အဆုံးသတ်သည့် စာလုံးများ
(a) recede (v) /rɪˈsi:d/ ( ဆုတ်သည်။ မှေးမှိန်သည်။နောက်ပြန်လျှောသည်။ ယုတ်လျော့သွားသည်။)
(b) secede (v) /sɪˈsi:d/ ( နှုတ်ထွက်သည်။ ခွဲထွက်သည်။)
(c) impede (v) /ɪmˈpi:d/ (ကြန့်ကြာသည်။ ဟန့်တားသည်။)
(d) precede (v) /prɪˈsi:d/ (ရှေ့မှ အရင်ကျသည်။ အရင်ဖြစ်သည်။)
3) 'eal' ဖြင့် အဆုံးသတ်သည့် စာလုံးများ
(a) reveal (v) /rɪˈvi:l/ ( ထုတ်ဖော်ပြသသည်။ ဖွင့်ချသည်။)
(b) appeal (v) /əˈpi;l/ ( အနူးအညွတ် မေတ္တာရပ်ခံသည်။ အယူခံဝင်သည်။)
(c) conceal (v) /kənˈsi:l/ ( ဖုံးကွယ်သည်။)
(d) seal (v) /si:l/ ( (ချိပ်) ပိတ်သည်။ အလုံပိတ်သည်။)
4) ‘eive’ ဖြင့် အဆုံးသတ်သည့် စာလုံးများ
(a) receive (v) /rɪˈsi:v/ (လက်ခံရရှိသည်။)
(b) perceive (v) /pəˈsi:v/ ( သတိမူမိသည်။ လေ့လာမိသည်။ သဘောပေါက်မိသည်။ တွေးဆမိသည်။)
(c) deceive (v) /dɪˈsi:v/ ( လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည်။ လှည့်စားသည်။)
(d) conceive (v) /kənˈsi:v/ ( စိတ်ကူးပေါက်သည်။ အကြံရသည်။ တွေးထင်သည်။)
(5) ‘ieve’ ဖြင့် အဆုံးသတ်သည့် စာလုံးများ
(a) achieve (v) /əˈtʃi:v/ ( အောင်မြင်သည်။ ဖြစ်မြောက်သည်။)
(b) believe (v) /bɪˈli:v/ (ယုံကြည်သည်။ ယုံကြည်ကိုးကွယ်သည်။)
(c) grieve (v) /gri:v/ ( ဝမ်းနည်းကြေကွဲသည်။)
(d) relieve (v) /rɪˈli:v/ (သက်သာရာရစေသည်။)
- အုပ်စု - ၄ - မှ ‘eieve’ ဖြင့် အဆုံးသတ်သည့် စာလုံးပေါင်းနှင့် အုပ်စု - ၅ -မှ ‘ieve’ ဖြင့် အဆုံးသတ်သည့် စာလုံးပေါင်းများမှာ မကြာခဏ လွဲမှတ်တတ်သည်။ 'Confusing words' များဖြစ်ပါ၍ spelling - စာလုံးပေါင်းများကို ဂရုတစိုက် ကျက်မှတ်လေ့လာထားသင့်ပါသည်။
- ယခုဖော်ပြခဲ့ပြီးသော စာလုံးများမှာ များသော အားဖြင့် two syllable word ခေါ် အသံ နှစ်ယူနစ်ရှိ စာလုံးများ ဖြစ်ပြီးလျှင် 'indeed'မှ လွဲ၍ အခြားစာလုံးများမှာ 'verb' ခေါ် ကြိယာများ ဖြစ်ကြပါသည်။
- ထို two syllable verb များကို pronounce အသံထွက် ဆိုရာတွင် 'stress' ခေါ် အသံကို 'force'အားစိုက် အသုံးပြုမှုကို second syllable ၌ ပြုလုပ်ရပါသည်။
- ယေဘူယျအားဖြင့် two syllable verb များတွင် 'stress' သည် ဒုတိယ syllable တွင် ကျရောက်ပါသည်။
- Phonemic scrip ဖြင့် ရေးသားပါက 'stress mark' ခေါ် အမှတ်အသား (') ကို ဒုတိယ syllable အရှေ့တွင် ထည့်ပြပါသည်။ ဥပမာ။ 'believe' ကို script ဖြင့် stress mark ထည့်ခါ၊ ဤကဲ့သို့ /bɪˈli:v/ ရေးသားပါသည်။ (ဖော်ပြခဲ့သော two syllable verb များ၏ script တိုင်းတွင် stress mark ထည့်သွင်းပြသထားသည်ကို သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။)
(6) ‘ief’ ဖြင့် အဆုံးသတ်သည့် စာလုံးများ
ဤနောက်ဆုံး ‘ief’ ဖြင့် အဆုံးသတ်သည့် အုပ်စုမှာ 'noun' ခေါ်နာမ်အုပ်စုဝင် စာလုံးများ ဖြစ်ပါသည်။
(a) thief (n) /θi:f/ (သူခိုး)
(b) chief (n) /tʃi:f/ ( အကြီးအကဲ)
(c) belief (n) /bɪˈli:f/ (ယုံကြည်ချက်)
(d) grief (n) /gri;f/ (ပူဆွေးမှု၊ သောက)
အုပ်စု - ၅ - တွင် ဖော်ပြထားသော 'believe' နှင့် 'grieve' တို့မှ verb ခေါ် ကြိယာများ ဖြစ်ကြသဖြင့် 'ieve' ဖြင့် အဆုံးသတ်၍၊
အုပ်စု - ၆ - တွင် ဖော်ပြထားသော 'belief' နှင့် 'grief' တို့မှ noun ခေါ် နာမ်များ ဖြစ်ကြ၍ 'ief' ဖြင့် အဆုံးသတ်ကြောင်း သတိပြုမှတ်သား စေလိုပါသည်။
Daw Tin Nwai Win (Retired Lecturer, Dept. of English, Yangon University)
MA (TEFL, YIOE)
Dip.T.E.O (Leeds University)
Permalink Reply by u myo aung on April 27, 2012 at 16:52
A great help for learners who are after "correct pronunciation".
Permalink Reply by Master Learner on April 27, 2012 at 17:19
Permalink Reply by alex.nawta on April 27, 2012 at 21:46
Thanz alot...... I get great help.......
Permalink Reply by May Myat Swe on April 28, 2012 at 15:12
This Discussion is really helpful for those like me studying phonetics. I do hope you can continue writing in near future.
Permalink Reply by The` Yu Win on April 28, 2012 at 17:11
Permalink Reply by upokun on April 29, 2012 at 9:55
Permalink Reply by 3jjkkl524we3j on April 29, 2012 at 11:50
Thanksalot becoz we need to learn.
Permalink Reply by Arkar Myo Oo on April 30, 2012 at 1:48
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် .............. နောက်အသစ်တင်ရင်လဲပို့ ပေးပါဦးခင်ဗျာ ................. သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုလဲ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို မျှဝေပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ ..................
Permalink Reply by 1lo7s4kyyaf7i on April 30, 2012 at 11:53
Permalink Reply by Zaw Win on April 30, 2012 at 15:04
Thanksalot, teacher. Please teach us every phonetics symbols.
We would like to learn it very much.